किन निरास लाग्छ सबैलाई सोमबारको दिन !
Monday, 12 Feb, 2018 11:35 AM
नेपालमा शनिबार बिदा हुन्छ । बाँकी देशमा अक्सर, दुईदिनको सप्ताहन्त हुनेगर्छ । आम कामकाजी व्यक्तिहरुको सप्तहान्त शुक्रबारपछि सुरु हुन्छ । अर्थात, शनिबार र आइतबार उनीहरु सप्तहान्तको मज्जा लिन्छन् । नेपालमा चाहीँ शनिबार मात्र । बाँकी दिन त अफिस जानु नै पर्यो । तर, विभिन्न नामले दिइने विदाको कारण कामकाजी दिन वर्षको आधा पनि हुँदैन नेपालमा । अन्य मुलुकमा भने सप्तहान्त ढुक्कले दुई दिन बित्छ, त्यसपछि नियमित काम कडाईपूर्वक हुन्छ । त्यसैले आम कामकाजी मानिसलाई सोमबारको दिन त्यति मज्जा लाग्दैन, जति शुक्रबारको दिन, सप्तहान्त सुरु हुनलाग्यो भनेर लाग्छ । नेपालको हकमा आइतबार काममा निस्कनुपर्दा ‘किन आउँछ होला यो आइतबार’ भन्ने सोचाई आम मानिसमा पर्छ । यो मनोविज्ञानको सवाल रह्यो । हप्ताभर काम गरेर सप्ताहन्तमा परिवार र साथीभाईसँग बिताउने रमाइलो गर्ने सोच पलाउँदा सप्ताहन्तको शुक्रबार जति रमाइलो लाग्छ, सुरुको सोमबार त्यति नै ‘बोर’ । बीबीसी फ्यूचरकालागि क्लाडिया हेमन्डले सप्तहान्तको मनोविज्ञानबारे एक रिपोर्ट तयार गरेका छन् ।
थ्याङ्क्स गड, इट्स फ्राइडे’ Thank God It's Friday
शुक्रवार हप्ताको आखिरी ‘वर्किङ डे’ । यसपछि आम कामकाजी व्यक्तिलाई सप्ताहन्तको छुट्टी । जोकसैले पनि, त्यसपछि अफिसको तनाबबाट मुक्त हुन परिवार या साथीभाईसँग समय बिताउँछन् । रमाइलो गर्छन् । यसैले हप्ताको आखिरी दिनको प्रतिक्षा व्यग्रताका साथ गरेका हुन्छन् उनीहरुले । सप्ताहन्तको सन्तोषले उत्साह भरिएको हुन्छ ।
यसको उल्टो आम मानिसलाई सोमबारको दिन त्यति रुचिकर हुँदैन । ‘लौ, फेरि सोमबार आयो । अफिसमा दुःखका दिन फेरि सुरु भयो’, सोचाई यस्तो रहेको हुन्छ । र, उनीहरु सोच्छन्, ‘सोमबारको दिन नै नभैदिएको भए कति जाति हुन्थ्यो होला ।’ यो उक्ति सुन्दा लाग्छ कि सोमबार त हप्ताको सबैभन्दा खराब दिन पो हो त । सात दिनमा यो यही दिन हो, जसलाई मानिसले सबैभन्दा बढी घृणा गर्छन् ।
के, साँच्चिकै आम मानिस सोमबारलाई घृणा गर्छन् त ? दुनियाभरमा भएका तमाम रिसर्चले यो बताउँछन् कि आम मानिसले सोमबारको दिनलाई रुचाउँदैनन् । किनकी, दुई दिनको आराम पछि उनीहरुलाई काममा जानुपर्छ र धेरै काम गर्नुपर्छ । यसैले तपाईंले जो कसैलाई सोध्नुस त, सोमबारलाई जीवनबाटै हटाइदिन चाहन्छन् उनीहरु ।
कतिपय मनोवैज्ञानिकहरुलाई लाग्छ कि यो सोचाई वास्तविकता भन्दा टाढा छ । वास्तवमा, आम मानिस सोमबार आउनुभन्दा अघि र सोमबार सकिएपछि अलग अलग विचार व्यक्त गर्छन ।
मनोवैज्ञानिहरुले केही व्यक्तिहरुसँग सोमबारभन्दा अघि प्रश्न गरेका थिए । उनीहरुमध्ये धेरैले आशंका व्यक्त गरे कि सोमबारको दिन धेरै नराम्रो हुनेवाला छ । अफिस जाँदा कामको बोझ सबैभन्दा धेरै हुनेछ । कसैलाई व्यवसायको लागि जानु छ भने उनीहरुलाई पनि धेरै नै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । कुल मिलाउँदा, शनिबार र आइतबारको दिन आम मानिस आउँदै गरेको सोमबारलाई लिएर बढी नै नकारात्मक सोच्छन् र निरास हुन्छन् । उनीहरुलाई सोमबार नरमाइलो हुने पीर हुन्छ ।
तर, तपाईं यो थाहा पाएर हैरान हुन पनि सक्नुहुन्छ, मानिसहरु जब सोमबारको हेक्टिक काम पुरा गर्छन्, त्यसपछि उनीहरुले दिने जवाफ पहिला भन्दा ठीक उल्टो हुन्छ । उनीहरुले त्यति बेला भन्छन्, ‘सोमबार त्यति धेरै नराम्रो पनि भएन । ठीकैसँग वित्यो ।’ कहिले काहीँ त सोमबारकै दिन उनीहरुको मुड पहिले भन्दा धेरै सकारात्मक पनि देखिन्थ्यो ।
समय वित्दै जाँदा सोचाई पनि बदलिन्छ
मनोवैज्ञानिकहरु भन्छन् कि वास्तवमा हामी आफ्नो अनुभवलाई ठीक उसैप्रकारले पछि महशुस गर्दैनौं । अर्थात, कुनै दिन निकै तनावपूर्ण वित्छ भने सायद पछिको कुनै दिन त्यति धेरै तनाव पनि व्यहोर्नु पर्दैन । जीवनका तमाम अनुभवलाई अलगअलग ढंगले महशुस गरिन्छ । जब त्यो समय वित्दै जान्छ, हाम्रो सोचाई र चिन्तन पनि बदलिँदै जान्छ ।
यो सोमबारको विषयमा मात्र सीमित हुँदैन । सप्ताहन्त (विकेण्ड)लाई लिएर पनि हुन्छ । धेरै मानिसहरु सप्ताहन्त बिताएपछि भन्ने गर्छन्, ‘ठीकै वित्यो मेरो बिदा त’ । उनीहरुमा खास उत्साह पनि देखिदैन, जसले शुक्रबार सप्ताहन्तमा यो गर्छु उ गर्छु भन्दै अनेक योजना बनाएर कल्पित भएका हुन्थे ।
मनोवैज्ञानिकहरुका अनुसार हरेक पल हामी केही न केही सोचिरहेका हुन्छौं, पछि त्यसलाई सम्झिन प्रयत्न गर्छौं । यसैगरी, ती चिजहरु पनि हामी ख्याल गर्दैनौं, जसलाई त्यतिबेला महशुस गरिएको हुन्थ्यो । यसै कारणले हो कि आउने समयलाई लिएर हाम्रो आफ्नो अनुमान गलत सावित पनि हुन सकछ । मानिस सोच्छन् कि सोमबार निकै निरासयुक्त हुनेवाला छ, तर सोही दिनमा त्यति धेरै निरास नबन्न पनि सक्छ । सप्ताहन्तलाई लिएर जुन उत्साहले शुक्रबार भरिन्छ । सप्ताहन्तको अन्त्यसँगै त्यो पनि विस्तारै भुत्ते भैदिन्छ ।
ए, हजुर जति तपाईं सोच्नुहुन्छ नि सोमबारको बारेमा, त्यति धेरै निरासाजनक छैन है । यो केवल तपाईंको दृष्टिकोणको सवाल हो । तपाईं स्वयं सोमबारलाई त्यतिविधि घृणा पनि गर्नुहुन्न, जति तपाईं सोच्नुहुन्छ ।